Kooriyaa Kaabaa Olompika dursuun agarsiisa waraanaa gaggeessite - BBC News Afaan Oromoo
Kooriyaa Kaabaa Olompika dursuun agarsiisa waraanaa gaggeessite
8 Guraandhala 2018
Kiim Joong-un fi haati warraa isaa Rii Sol-ju agarsiisaa irratti simataman
Kooriyaan Kaabaa Olompikni Gannaa Kooriyaa Kibbaatti qopha'e banamuuf guyyaan tokko yeroo afutti agarsiisa waraanaa gaggeessaan biyyattii Kiim Joongi-un irratti argaman gaggeeffate.
Kooriyaan Kaabaa yeroo baayyee agarsiisa waraanaa ishee kanaan kan dhaadattu ta'us gabaasni agarsiisa kanaa TVn kan mullate erga sagantichi darbee booda.
Agarsiisni waggaa waggaan gaggeeffamu kun, hundeeffama waraanaa biyyattii irratti kan dhiyaatu yommuu ta'u yeroo baayyee Ebla keessa gaggeeffama. Barana garuu Gurraandhala 8'tti siqeera.
Kunis hariiroo sababa Olompikaan uumamuuf malu waan miidhuuf akka hanqinaatti ilaalama.
Waa'ee Agrasiisa Kanaa Maal Beekna?
Kamisa ganama TV mootummaa fiilmiiwwan waa'ee jaalala biyyaa kan kallattiidhaan tamsaa'aajiru fakkaatu gadi- dhiise.
Garuu TV iirratti agarsiisni mullataa ture kan boodatti arkifateefi kan hin saganteeffatamiin saatii 17:30 local time (08:30 GMT) irratti ture.
Gareen agarsiisa waraanaa kun muraasa yommuu ta'u Kiim Joongi-un looltoota dubbisaa haadha warraa isaa Ri Sol-ju waliin mullataniiru.
"Biyyi addunyaa kanarra jiru kamiyyu hundeeffama humna waraanaa isaa akka dhimma ijootti fudhatee baasii guddaa baasuun kabajuun baratamaafi bu'uura hunduu irratti walii galudha," jechuun ibsa gaazexaan Garee Paartii Hojjetootaa kan ta'e 'Rodong Sinmun'.
Ameerikaan garuu xiyyeeffannon Taphoota Olompikaa irraa ta'uu waan qabuuf agarsiifni waraanaa kun qophaa'uu hin malu ture jetti.
Akka dhaabbata Oduu Kooriyaa Kaabaa KCNA jedhutti, Kooriyaan Kaabaa yerro taphoota Olompikaa kana aanga'oota Ameerikaa waliin walarguuf hin kaayyeffanne.
Goodayyaa suuraa Agarsiisa waraanaa agarsiisuun Kooriyaa Kaabaaf waan haarawaa miti
Aanga'oonni mootummaa Kooriyaa Kibbaa ji'a darbe akka jedhanitti loltoonni 13,000 ta'aniifi meeshaawwan 200 ta'an Piyoongiyaangi keessaa naannoo buufata xiyyaaraa shaakalaaf jedhamee buufatanii akka jiran dubbatanii turan.
Beektonni akka jedhanitti Kooriyaan Kaabaa misaa'ela fagoo deemuu agarsiisuuf jirti.
"Yeroo agarsiisa kanaa kan ilaaluun nurra jiru, konkolaataawwan misaa'elaa Kooriyaan Kaabaa agarsiiftu, meeqan isaanii akka jiran, akkasumas misaa'elii akka haarawaaatti qophaa'anidha," jedha xiinxalaan dhimma Kooriyaa Kaabaa David Schmerler.
"Haa ta'u malee, waanti yaadachuu qabnus waanta tokko agarsiisan jechuun waan sana hojjechaa jiru jechuu miti. Yeroo darban keessa, Kooriyaan Kaabaa agarsiisa humna waraanaa hin omishamne agarsiisaa turte."
"Bara 2012, Piyoongiyaangi meeshaa 'Hiwasong-13', kan tasuma yaalamee hin beekneefi hanga beeknutti guutummaatti akka badu taasifame agarsiiftee turte."
Kabajni bara kanaa, hundeeffama Waraanaa Uummata Kooriyaa waggaa 70ffaa kan Guraandhala 8, 1948 itti hundeeffametu kabajama. Piyoongiyaangi humna waraanaa ishee Ebla 25 irra kabajaa turte.
Agarsiifni humna waraanaa kun taphoonni Olompikii Gannaa kan Guraandhala 9 hanga 25'tti magaalaa Kooriyaa Kibbaa 'Pyeongchang' jedhamtu keessatti jalqabuuf guyyaa tokko yeroo hafutti.
Kiim Yo-Joongi, obboleettiin gaggeessaa Kooriyaa Kaabaa Kiim Joongi-un Tapha yeroo banamu Kooriyaanonni lamaan alaabaa tokko jalatti hiriiruuf jiran irratti hirmaachuuf jirti.
Sagantaa baniinsaa Jimaata 'Pyeongchang' keessatti gaggeeffamu irratti argamu jedhamanii eegamaa kan jiran Itti-aanaan Pirezedaantii Ameerikaa Maayik Peensi "Kooriyaan Kaabaa sagantaa Taphootaa kana fayyadamuun sirna biyyattii keessatti dhugaaa lafarra jiru aguuguudhaaf mallattoo humna qabeessa fayyadamuu akka hin qabne akka hubattu," nan barbaada jedhan.
Magaalan Olompika qopheessite 'Pyeongchang' agarsiisni waraanaa kun adeemsa Olompikaarraa dhiibbaa hin geessisu jetti.
Maaliitti namoonni 130 ajjeefaman